Barcelona Oo Si Raaxo Leh Ugu Soo Baxday Wareega 16ka
Barcelona ayaa u soo gudubtay wareega 16ka Champions League ka dib markii ay 4-0 kaga badiyeen kooxda Dynamo Kyiv oo marti loo ahaa iyadoo tababare Koeman uu isbedelo badan ku sameeyay shaxdiisa islamarkaana soo safay xiddigaha keydka ee kooxda.
Zidane ayaa maqan lix maalmood
Laga soo bilaabo De Bruyne, Pogba ilaa Terry
Lionel Messi iyo Frenkie de Jong ayaa la nasasiiyay kulankaan iyadoo Barcelona ay ku dhibtootay qeybtii hore ee ciyaarta inay shabaqa ka soo taabato kooxda reer Ukraine inkastoo ay kubada inteed badan heysteen.
Daqiiqadii 52aad ee qeybtii labaad ee ciyaarta ayay Barcelona la wareegtay hogaanka ciyaarta markii uu daafaca Sergino Dest uu kubad uu ka soo shaqeeyay islamarkaana uu uga booday Braithwaite uu shabaqa ku hubsaday.
Waa goolkiisii ugu horeysay ee uu Dest u dhaliyo Barcelona, waana xiddigii Mareykan ee ugu horeeyay ee gool u dhaliya kooxda Catalans.
Shan daqiiqo ka dib Barcelona ayaa hogaanka sii dheereysatay markii koorno la soo qaaday uu madax ku taabtay xiddig fursad la siiyay markii ugu horeysay Champions League Oscar Mingueza waxaana shabaqa ku taabtay Martin Braithwaite.
Braithwaite ayaa daqiiqadii 70aad ciyaarta hurdo u diray isagoo gool rigoore ah u saxiixay Barcelona markii rigoorada isaga lagu galay oo lagu kala tuuray xerada ganaaxa, waana goolkiisii labaad ee ciyaarta.
Griezmann ayaa gool afaraad ku soo qatimay ciyaarta markii uu Griezmann shabaqa ku taabtay kubad uu ka helay Jordi Alba.
Barcelona ayaa ciyaarta iska maamuleysay iyagoo aan tabin xiddigaha waa weyn ee ka maqnaa kulankaan, waxayna kubada heysteen celcelis ahaan boqolkiiba 70aad.
Waxay ciyaarta ku soo dhamaatay 4-0 oo ay Barcelona ku badisay iyagoo u soo baxay wareega 16ka madaama ay wada badiyeen afartii kulan ee ay ciyaareen Group G waxayna ku hogaaminayaan 12 dhibcood.
Juventus ayaa kula biirtay Barcelona wareega 16ka Champions League ka dib markii ay guul ciriir ah oo 2-1 ah ka ay gaareen kooxda yar ee Ferencvaros iyadoo Alvaro Morata uu waqtigii dhimashada uu dhaliyay goolka guusha.
Juventus ayaa u baahneyd guul si ay ugu soo baxaan wareega 16ka laakiin waa ay ku rafaadeen guushooda iyagoo birta garaacay dhowr jeer islamarkaana qasaariyay fursado badan.
Kooxda Ferencvaros ayaa ku hormartay goolka daqiiqadii 19aad markii uu u saxiixay Myrto Uzuni laakiin Juventus waxaa u barbareeyay Cristiano Ronaldo daqiiqadii 35aad.
Xiddiga reer Portugal ayaa sii dheereysaty rikoodhkiisa laacibka ugu goolasha badan abid Champions League isagoo dhaliyay goolkiisii 131aad ee 172 kulan uu ciyaaray tartankaan.
Juventus ayaa birta garaacday dhowr jeer qeybtii labaad halka Cristiano Ronaldo uu daqiiqadii 70aad qasaariyay fursad gool banaan oo faaruq ah, iyadoo goolhayaha uu kubada ka taabtay ilbiriqsigii ugu danbeeyay.
Alvaro Morata ayaa goolka guusha dhaliyay waqtigii dhimashada ciyaarta taasoo ka dhigan inay Juventus u soo baxday wareega 16ka iyagoo leh 9 dhibcood waxayna 3 dhibcood ka danbeeyaan Barcelona.
Dhanka kale Borussia Dortmund ayaa talaabo weyn u qaaday u soo bixitaankeeda wareega 16ka Champions League ka dib markii ay 3-0 ku xasuuqday kooxda Club Brugge oo marti u aheyd.
Erling Haaland oo wacdarihiisa laga yaaban yahay ayaa labo gool u dhaliyay isagoo gooldhalinta Champions League xilli ciyaareedkan ku hogaaminaya 6 gool, waxa uu sidoo kale dhaliyay 17 gool 13 kulan uu tartamada oo dhan u saftay Dortmund xilli ciyaareedkan.
Goolka kale ee ay ku badisay Dortmund waxaa saxiixay xiddiga Ingariiska Jadon Sancho.
Kooxda Jarmalka ayaa Group F ku hogaamineysa 9 dhibcood ka dib afar kulan oo la ciyaaray, waxay hal dhibic ka sareeyaan kooxda Talyaaniga ee Lazio oo kaalinta labaad ku jirta kuwaasoo 3-1 kaga badiyay kooxda Zenit oo iyadu ka hartay tartanka. Club Brugge oo kaalinta 3aad ku jirta ayaa leh 4 dhibcood.
#1 Weight Loss Swap To Lose 60 Kilos in a 12 months